13 February, 2011 in Maqaallo by Baidoanews Webmaster
Kaahiye, waa sax hadalkaaga Kheyrly Me jeroo Magoo?waakan aniga ee soo daa maanta waxa aad heysid ee ila doondooneysey.
Walaaley Keerow, waxaan layaabey dadkaan maalmahaan meelaha ka hadhadlo oo balaayada idin soo wado, sida abwaankii shalay iyo nin aan uheysaney inuu yahay nin soomaaliyeed oo bilaabey inuu Raxweynta soo kiciyo oo dadka kale ku diro.
Kaahiye sxb waxa ay dadkaasi sheegayaan waa wax sax ah ee walaal sow xaq uma lihinoo hadii aanu nahay reer Keerow inaanu dhulkeena wax usameysano, midnoqano, oo dalkana tookadeena aa wax ka noqono?
Keerow waad waalatay waxaan moodi jirey nin Madax ah oo wax fahmaya laakiin garaadkaaga ayaad i tustey maanta, waayo ma ogtahay Abwaanka inuu yahay nin aan si wanaagsan ugu dhexmuuqanin fanaaniinta caalamka sida , Farxiyo fiska, Xadraawi, Cumar dhuule, sidee ku aamineysaa warkiisa ma asagaa caan ah.
ninka kale ee Aqoonyahan ka ah waa nin Aduunka aan sidaa loogayaqaanin sida Proff, Abdi Ismaaciil Samatar, Warfaa, Cadow iyo kuwo kaloo walaalo nahay marka muxuu idin gelinaa balaayo, waaba tan adigii oo keerow ah oo ana dhibkii isla soo marney maanta igu dayey.
Keerow aan wax kuu sheego, Anaga hadii aanu nahay Kaahiyaha dego Koonfurta waxaanu jecelnahay reer Keerow anagoo dhexdeena aan mideysaneyn hadana hadii aad is raacdaan ogaada inaanu idin midoobeyno oo aan ka shaqeyneyno sidii markale aanu idin baa ba'in laheyn.
waxaanu kuu sheegayaa oo adiga kaamaqan Adiga yaa tahay? Qabiilkee kasoo jeedaa Eelaaydu, wa ay badan tahayee, Ninka hadleyna yuu yahay? maxaadna ku taageereysaa ma adiguu kugu qolo yahay? Dabaal aan aqli laheyn ee kasoo tasho arintaan isu kaaya keen maqaayadii Ina-Kaahiye Fadhigana anaa qabo.